အကွိတျအနယျယှဉျပွိုငျမဲ့ပှဲ အခြိနျပိုလုံးဝမပါတဲ့ နှဦေး ဖလား ရှူံးထှကျပှဲစတငျနပေါပွီ – Shwe Thadin
08/01/2022 admin News 0
ဒီပှဲမှာ…ရမျးသမျးယုတျ အသငျး ( နှငျ့)ဒေါငျးသှေးမာနျ. အသငျးတို့ အကွိတျအနယျယုဉျပွိုငျမဲ့ပှဲ နောကျဆုံး ရှုံးထှကျဗိုလျလုပှဲ ကွီးပါခဗြာ..ခုဆိုရငျဖွငျ့သနျး 50.သော လူထုပရိတျသတျကွီးကလညျး.. နှဦေးရငျပွငျ ကစားကှငျးကွီးရဲ့ လေးဘကျလေးတနျ ကွညျ့စငျမှာဖွဈ ပွညျ့လြှံစှာအားပေးစောငျ့ကွညျ့နလြှေကျပါခဗြ…
နှဈဖကျအသငျးရဲ့ … ပါဝငျကစားကွမဲ့ ကစားသမားမြားမှာဖွဈ .အစိမျးရောငျဝတျစုံနဲ့ ( ရမျး.သမျး.ယုတျ.) အသငျးမှာဖွငျ့ အသငျးနညျးပွ.မငျးအောငျလှိုငျ. (ခ) မအလ အသငျး ခေါငျးဆောငျ၊ စိုးဝငျး (လ်ဘကျခွောကျမှူနျ့) ရှတေ့နျး ညာတောငျပံ၊ အောငျလငျးထှေး (သွဇာသီး) ဘယျတောငျပံ၊ မွထှနျးဦး. (ရာသီးသှေး) အလယျတနျး၊
ငမဲလုံး (မွငျးလီရောငျ)၊ ဝဏမောငျလှငျ ( ဖားဂုံညှငျး)၊ သနျးဌေး (ရလေိုကျငါး)၊ နောကျတနျးခံစဈ ကွူကွူလှ ( ထှနျစကျသှား) မနျးညိမျးမောငျ… ( ကွောငျလြှာသီး) နံသာလှမြှငျ့ ….. (အခြိုမှူနျ့) ဂိုးဖမျး……သကျသကျခံ (ဘာလာလာ)…. နှငျ့တဖကျမှ
ဝတျစုံအနီဖွငျ့ ညာဘကျခွမျးကှငျးမှာနယေူထားတဲ့ ဒေါငျးသှေးမာနျ အသငျးမှပါဝငျကစားသူမြားကဖွငျ့ ရှတေ့နျးတိုကျစဈမူးက Dr.Sasa ဖွဈပွီး ညာတောငျပံမှ.. ဦးရညျမှနျ ဘယျတောငျပံ…
ဦးမငျးကိုနိုငျအလယျတနျးတိုကျစဈ KNU. KIA. pdf.လူကြှံဘောစောငျ့သူကတော့ဦးကြျောမိုးထှနျးပါ။ ဒျေါဇငျမာအောငျရဲ့လကျပဈဘောကိုခေါငျးတိုကျသှငျးဖို့ ဒျေါအိသဉ်ဇာမောငျ ကအသငျ့စောငျ့ဆိုငျးနပွေီး
ဂိုးသမား သနျး.၄၀.(ပွညျသူ) ဖွဈကာ နညျးပွဆရာကတော့…Dr.ဇျောဝစေိုး ပဲဖွဈပါတယျ။ မကွာခငျမှာ ဟိုဘကျအရူးအသငျးက ကိုယျ့ဂိုးကိုယျပွနျသှငျးကွပါတော့မယျ။ ရှုံးထှကျဖလားမို့(အခြိနျပို လုံးဝမပါ)ဘောလုံးခဈြပရိတျသတျမြား တီဗှီဖနျသားပွငျမှ မကွာမီစောငျ့ကွညျ့အားပေးကွပါရနျ ။
ဒီပွဲမှာ…ရမ်းသမ်းယုတ် အသင်း ( နှင့်)ဒေါင်းသွေးမာန်. အသင်းတို့ အကြိတ်အနယ်ယုဉ်ပြိုင်မဲ့ပွဲ နောက်ဆုံး ရှုံးထွက်ဗိုလ်လုပွဲ ကြီးပါခဗျာ..ခုဆိုရင်ဖြင့်သန်း 50.သော လူထုပရိတ်သတ်ကြီးကလည်း.. နွေဦးရင်ပြင် ကစားကွင်းကြီးရဲ့ လေးဘက်လေးတန် ကြည့်စင်မှာဖြစ် ပြည့်လျှံစွာအားပေးစောင့်ကြည့်နေလျှက်ပါခဗျ…
နှစ်ဖက်အသင်းရဲ့ … ပါဝင်ကစားကြမဲ့ ကစားသမားများမှာဖြစ် .အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံနဲ့ ( ရမ်း.သမ်း.ယုတ်.) အသင်းမှာဖြင့် အသင်းနည်းပြ.မင်းအောင်လှိုင်. (ခ) မအလ အသင်း ခေါင်းဆောင်၊ စိုးဝင်း (လ္ဘက်ခြောက်မှူန့်) ရှေ့တန်း ညာတောင်ပံ၊ အောင်လင်းထွေး (သြဇာသီး) ဘယ်တောင်ပံ၊ မြထွန်းဦး. (ရာသီးသွေး) အလယ်တန်း၊
ငမဲလုံး (မြင်းလီရောင်)၊ ဝဏမောင်လွင် ( ဖားဂုံညှင်း)၊ သန်းဌေး (ရေလိုက်ငါး)၊ နောက်တန်းခံစစ် ကြူကြူလှ ( ထွန်စက်သွား) မန်းညိမ်းမောင်… ( ကြောင်လျှာသီး) နံသာလှမျှင့် ….. (အချိုမှူန့်) ဂိုးဖမ်း……သက်သက်ခံ (ဘာလာလာ)…. နှင့်တဖက်မှ
ဝတ်စုံအနီဖြင့် ညာဘက်ခြမ်းကွင်းမှာနေယူထားတဲ့ ဒေါင်းသွေးမာန် အသင်းမှပါဝင်ကစားသူများကဖြင့် ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မူးက Dr.Sasa ဖြစ်ပြီး ညာတောင်ပံမှ.. ဦးရည်မွန် ဘယ်တောင်ပံ…
ဦးမင်းကိုနိုင်အလယ်တန်းတိုက်စစ် KNU. KIA. pdf.လူကျွံဘောစောင့်သူကတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းပါ။ ဒေါ်ဇင်မာအောင်ရဲ့လက်ပစ်ဘောကိုခေါင်းတိုက်သွင်းဖို့ ဒေါ်အိသဉ္ဇာမောင် ကအသင့်စောင့်ဆိုင်းနေပြီး
ဂိုးသမား သန်း.၄၀.(ပြည်သူ) ဖြစ်ကာ နည်းပြဆရာကတော့…Dr.ဇော်ဝေစိုး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ဟိုဘက်အရူးအသင်းက ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်ပြန်သွင်းကြပါတော့မယ်။ ရှုံးထွက်ဖလားမို့(အချိန်ပို လုံးဝမပါ)ဘောလုံးချစ်ပရိတ်သတ်များ တီဗွီဖန်သားပြင်မှ မကြာမီစောင့်ကြည့်အားပေးကြပါရန် ။